Ny fanondranana fitaovana fitsaboana any Shina dia ...
Tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2020, nisy valan'aretina pnemonia nanerana ny tany nanerana an'izao tontolo izao, ary niteraka fikorontanana mafy teo amin'ny varotra iraisam-pirenena sy ny toekarena manerantany. Voakasiky ny valanaretina io dia nitohy nikatso ny varotra iraisampirenena tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2020, fa ny fitomboana haingana amin'ny fanondranana fitaovana fitsaboana ...
Ny vidin'ny vy dia mety hametraka avo lenta toy ny tinady ...
Rehefa miakatra ny vokatra aorian'ny fialantsasatry ny Fetin'ny Lohataona dia miatrika fiakaran'ny vidim-piainana ny orinasan'ny sinoa, miaraka amina entana sasantsasany toy ny rebar mitsambikina 6,62 isan-jato tamin'ny andro fifanakalozana farany talohan'ny Fetin'ny Lohataona ka hatramin'ny andro fiasana fahefatra taorian'ny fialantsasatra, hoy ny indostria rese ...
Fandriana fikarakarana ao an-trano - ampahany amin'ny fianakavianao
Na dia mihatsara aza ny fiaraha-monina dia tsy mitsaha-mihatsara ny fari-piainan'ny olona, ​​fa ny isan'ny olona mila karakaraina dia mitombo isan-taona. Ny fikarakarana ny be antitra dia nanjary olana maika tokoa, ary ny ankamaroan'ny fikarakarana be antitra dia mbola tokony hovahan'ny fianakaviana ihany. Na izany aza, ny ankamaroan'ny ...
Maninona no mihamaro ny fianakaviana mividy fandriana fitaizana be antitra
Ny hafainganan'ny fahanterana dia mitombo isan'andro. Mino aho fa namana maro no hizara izany fahatsapana izany amiko. Raha ny marina dia izany no izy. Noho ny fitomboan'ny tahan'ny fahanterana, mihamaro hatrany ny aretina mitaiza an'ny be taona. Ka manoloana ireo olana ireo dia hanana fanovana kely amin'ny ...
Ahoana ny fomba hisafidianana fandriana mahomby izay ...
Amin'ny fiainana, noho ny aretina, ny lozam-pifamoivoizana ary ny antony hafa, maro amin'izy ireo no tsy afaka mandeha mandrakizay, ary namoy ny ainy maro. Tokony hiezaka araka izay tratry ny herintsika isika hanao zavatra amin'ny herin'izy ireo hampamirapiratra ny fiainany. Fandriana fitaizana be antitra maro no ahafahan'izy ireo miaina milamina ...